Ungayifometha kanjani ithebhulethi ye-Android: Zonke izindlela | Izindaba zamagajethi
Ungayifometha kanjani ithebhulethi ye-Android
U-Eder Esteban | | Android, Izifundiswa
Okwamanje, amaphilisi amaningi emakethe asebenzisa i-Android njengohlelo lokusebenza. Ngakho-ke ukukhethwa kwamamodeli emakethe kukhulu kakhulu. Ngakho-ke, kufanele ube njalo izici ezithile ku-akhawunti lapho uthenga ithebhulethi entsha. Ngemuva kwesikhashana, kungahle kube nezinkinga ngaleyo tablet.
Kungenzeka ukuthi enye i-malware ishelele kuwo, noma ukuthi kunezinkinga ngokusebenza kwayo. Noma ukuthi umnikazi ucabanga ukuyithengisa. Ezimweni ezinjalo, Isixazululo esivame kakhulu kumathebulethi e-Android ukubheja ukusihlela.
1 Yini ukufometha ithebhulethi ye-Android?
2 Fometha ithebhulethi ye-Android
2.1 Fometha kusuka kuzilungiselelo
2.2 Fometha ithebhulethi kumenyu yokutakula
Yini ukufometha ithebhulethi ye-Android?
Endabeni yamadivayisi we-Android, njengethebhulethi, singakhuluma ngokufometha noma ukubuyisela imboni. Le nqubo isho ukuthi yonke idatha ekuthebhulethi eshiwo izosulwa. Ngakho-ke wonke amafayela akhona (izithombe, amavidiyo, umculo, amadokhumenti, njll.) Ngaphezu kwezinhlelo zokusebenza ezilandiwe, azosuswa ngokuphelele. Ngeke kube khona umkhondo walawa mafayili kuthebhulethi.
Le yinqubo enobudlova, kepha iyenzeka ithe ithebhulethi ye-Android ibuyele esimeni sayo sokuqala. Kusukela lapho ufometha, ibuyela esimeni lapho ishiye khona ifektri. Yingakho yaziwa nangokuthi ukubuyiselwa kwefektri. Le nto yenziwa ngezikhathi ezithile, ngoba kusho ukulahlekelwa yiyo yonke idatha ekwithebhulethi okukhulunywa ngayo.
Ngalokho, uma umnikazi ecabanga ukuthengisa leyo tablet, noma ukuyinikeza omunye umuntu, kuyindlela enhle yokuvimbela lowo muntu ekutholeni ukufinyelela kudatha yakho. Futhi uma kungene igciwane, yini engenzeka kumadivayisi we-Android, ukufometha kuyindlela yokukususa, uma ingekho enye inketho esebenza ngalowo mqondo. Ngakho-ke ezimweni ezithile, kuyinto engenziwa. Ukuyithola kuthebhulethi, kunezindlela ezimbalwa ezahlukahlukene. Amafomu esikutshela wona ngezansi.
Ungayifometha kanjani i-iPad
Fometha ithebhulethi ye-Android
Into ejwayelekile ukuthi kumathebulethi e-Android kunezindlela ezimbalwa ezahlukahlukene zokwenza lokhu kufomatha. Kuzona zozimbili lezi zinto kuyinto esingayithola kuthebhulethi uqobo. Awudingi amanye amathuluzi ukuze ukwazi ukukufometha. Yize kungahle kube namamodeli angasivumeli kulezi zindlela ezimbili. Kungancika ekwakhiweni ngakunye noma kumodeli, ngokungeziwe kuhlobo lohlelo olusebenzisayo.
Fometha kusuka kuzilungiselelo
Indlela yokuqala yokufometha ithebhulethi ku-Android kusuka kuzilungiselelo zakho. Ngaphakathi kwazo kunesigaba lapho kungenzeka khona ukuqala le nqubo. Ngakho-ke, kufanele sivule izilungiselelo zayo kuqala. Uma usungaphakathi kubo, indawo ethize yalo msebenzi ingashintsha isuke kolunye uhlobo iye kolunye.
Kwamanye amaphilisi kufanele singene esigabeni sokuphepha. Ngenkathi kokunye kuyisigaba sezinketho ezithuthukile okufanele singene kuso. Kunoma ikuphi, noma ngabe ukuphi, isigaba esisithandayo sibizwa nge-Backup / Buyisela. Ngakho-ke, singayifuna uma ingekho ngaphakathi kwezilungiselelo zethebhulethi yethu ye-Android ukuze isheshe ifinyelele kuthebhulethi. Kanye kulesi sigaba, inqubo ingaqala.
Into yokuqala abasebenzisi ebuzwa ngayo uma ufuna ukwenza isipele. Njengalapho ufometha sizosusa yonke idatha kuthebhulethi, kuhle ukwenza ikhophi laleyo datha ongafuni ukuyilahla. Endabeni ye-Android, singagcina kalula isipele ku-Google Drayivu. Lapho usushilo ikhophi, lapho-ke kungenzeka ukufaka isigaba sokubuyiselwa kwedatha yeFektri.
Kulesi sigaba inqubo yokufometha ithebhulethi iyaqala. Umsebenzisi uzobuzwa ukuthi ngabe unesiqiniseko sokuthi bafuna ukwenzani. Uma usunayo isipele esinjalo, ungaqala manje. Ngakho-ke kufanele nje uyinikeze ukwamukela. Ngemuva kwalokho, ukufomatha kwale thebhulethi ye-Android kuzoqala. Kungathatha imizuzu embalwa ukuqeda, kuya ngenani lemininingwane egcinwe kuyo.
Ungayifometha kanjani i-iPhone futhi uyiyeke isanda kuphuma ebhokisini
Fometha ithebhulethi kumenyu yokutakula
Kukhona indlela yesibili, njalo esebenzayo yokufometha ithebhulethi ye-Android. Imayelana nokusebenzisa okubizwa ngemenyu yokutakula. Ukuyifinyelela kuzohluka kuye ngemodeli eyodwa, ngoba kunezinhlelo ezimbili. Okokuqala ukuvala ithebhulethi, bese ugcina izinkinobho zamandla nevolumu zicindezelwe ngasikhathi sinye imizuzwana embalwa, kuze kuvele imenyu esibukweni. Esimweni sesibili, inqubo iyafana, kuphela kukhona amaphilisi lapho kufanele ucindezele khona futhi wehlise ivolumu.
Ngakho-ke, kuya ngohlobo lwethebhulethi eshiwo, kukhona ukufinyelela kumenyu eshiwo. Lapho le ndlela okukhulunywa ngayo isetshenzisiwe, kukhonjiswa esikrinini imenyu enezinketho ezahlukahlukene. Enye yezinketho esikrinini yi-Factory Setha kabusha noma Sula idatha, womabili amagama angavela ezimweni eziningi. Le inketho ofuna ukuyisebenzisa ngaleso sikhathi.
Usebenzisa izinkinobho zevolumu phezulu naphansi kufanele uhambe phakathi kwalezi zinketho. Uma ufika kunketho yokususa idatha, kufanele sebenzisa inkinobho yamandla ethebhulethi ukuqinisekisa. Isikrini sizokhombisa umyalezo obuza umsebenzisi ukuthi uqinisekile yini ukuthi bafuna ukwenza lokhu. Ngoba inqubo yokufometha ithe Android tablet izoqala. Ukuqinisekisa, cindezela inkinobho yamandla futhi.
Ngale ndlela, ukufomatha kwethebhulethi eshiwo nge-Android kuzoqala. Futhi, inqubo izothatha imizuzu embalwa ukuqeda kuthebhulethi. Uma usuqediwe, umyalezo uzovela esibukweni. Ukuyiqala futhi, into ejwayelekile ukuthi kufanele khetha inketho "yokuqalisa kabusha uhlelo manje". Ngale ndlela, uhlelo luqala futhi, kepha ngayo yonke idatha esivele isusiwe kuthebhulethi. Ibuyela esifundeni lapho ishiye khona ifektri.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Android » Ungayifometha kanjani ithebhulethi ye-Android
Isikhulumi esingenantambo esine-Motorola ngezindleko eziphansi ze-Motorola Sonic